China abicah Keychains mveliso kunye nabenzi | SJJ
Keychains abicah kunye keyrings bamkelekile ngabantu kulo lonke ihlabathi ngenxa ezikumgangatho ophezulu, ixesha elide kunye uphawu ezinemibala. Zisetyenziselwa unyuselo, ezemidlalo, izikolo, amaqela kunye neminye iminyhadala.
I-Silicone Keychainii-keyrings kunye nee-keyrings zamkelwe ngabantu kwihlabathi liphela ngenxa yomgangatho ophezulu wazo, ixesha elide kunye neempawu ezinemibala. Zisetyenziselwa unyuselo, ezemidlalo, izikolo, amaqela kunye neminye iminyhadala. Inkqubo ye-amaqhosha abicahKwaye ii-keyrings ezikumgangatho ophezulu ziimveliso ezifanelekileyo zokukhuthaza umbutho wakho okanye iinkampani, zibonise izimvo zabayili kunye nemiphefumlo. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nokudityaniswa kombala kwenza ifayile yeamaqhosha abicahkunye nee-keyrings ezithandekayo nezinomtsalane kwaye zinomtsalane, kulula ngakumbi ukubhengeza iilogo kuluntu. Abayi kuphula, kwaye imibala ayipheli nokuba isetyenziselwe ixesha elide, ukufikelela kwinqanaba eliphezulu kuqoqosho.
Izipho eziMnandi eziKhazimlayo zithumela kwelinye ilizwe izigidi zezitshixo zamaqhosha abicah kunye namaqhosha rhoqo ngenyanga. Umgangatho kunye nexesha lokukhokela liyanconywa ngabathengi bethu. Pls nxibelelana nathi ngalo naliphi na ixesha, iqela lethu leengcali liya kunceda kwiiprojekthi zakho ngexesha lokuqala.
Uyilo: 2D, 3D, icala elinye, macala kabini
Imibala: Unokutshatisa imibala ye-PMS, ukujikeleza, icandelo, ukukhanya-ebumnyameni, imibala efanelekileyo
Isinamathiselo: Xhuma umsesane, amakhonkco aphambili, izitshixo, ihhuku okanye ulandele imiyalelo yakho
Egqithileyo Amatyala efowuni abicah
Okulandelayo: Iingxowa zemali zeSilicone kunye neebhegi zeSilicone
I-China Eyona nto ilungileyo kwi-Awm yeefektri zeeFektri
I-China yeyona mveliso iphambili ye-Awm
I-China Best Mustang Keychain Pricelist
China Best Mustang Keychain kuchaphulo olu
I-Silicone Bracelet Keychain
Ukukhwaza inkukhu yenkukhu